musha More Boxers Bio Manny Pacquiao Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yemuFilipino nyanzvi yebhokisi uye wezvematongerwo enyika anozivikanwa zvikuru nezita remadunhurirwa ".Pac-Man ”.
Our Manny Pacquiao Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika zvino.
Kuongororwa kwePhilippines Legendary mutambi wetsiva kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvazvo Bhabhironi rake rinotyisa uye maziso mashoma machena. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveManny Pacquiao's biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Manny Pacquiao Nyaya Yehucheche - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Kune Biography kutanga, Manny Pacquiao akazvarwa musi we 17th waDecember 1978 muKibawe kuBukidnon, Philippines.
Akanga ari mwana wechipiri akazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake Dionesia Pacquiao uye baba vake Rosalio Pacquiao. Zvino, ngatikuzivisei kune Vabereki vaManny Pacquiao.
Manny akakurira mune imwechete kamuri chivumba mumusha weTango muKibawe pamwe nasisi vake mukuru Sidra pamwe nevakoma vaviri mukoma naBobby naRogelio.
Mhuri yake panguva iyoyo yaive yevarombo zvakanyanya mumusha vaisakwanisa kudya chikafu chakakurumbira - Mupunga asi vachirarama neBanana nemidzi yezvirimwa. Manny akarererwa mune zvitete zvakangofanana Bella poarch. - Tiktoker ane mukurumbira kubva kuPhilippines.
Muchiedza chimwe chete, Manny nevanin'ina vake vakapedza chikamu chiri nani chemakore avo ekuumba vakapfeka mbatya dzakasakara uye havana kana kumboziva kuti terevhizheni yaitaridzika sei.
Yakanga ichingova nyaya yenguva mukomana mudiki uyo aidzidzira tsiva sechinhu chekuzvivaraidza akatora nhanho dzakakura pakurwisa nzira yake yekubuda mumaketani nemaoko ehurombo hwakanyanya.
Uyu ndiManny Pacquiao semwana, achienda zvaanoda zvakanyanya.
Manny Pacquiao Dzidzo:
Pacquiao aive nedzidzo yake yekutanga paSaavedra Saway Elementary chikoro, kwaakadzidza kusvika giredhi rechitanhatu.
Paaive pachikoro ichi, aizivikanwa semwana anotendeka aizviisa mukuranga kwevadzidzisi vake.
“Haugone kudzidzisa vana usina chirango. Dzimwe nguva ndairova kuti vaite hunhu. Ndinodada kuti ndaive mudzidzisi waManny ”.
Anocherekedza Mudzidzisi wepuraimari chikoro, Constancia Pelayo.
Mutambi wetsiva aive achiri kuchikoro chepuraimari baba vake pavakasiya mhuri. Somugumisiro, Manny (ane makore 13), akamanikidzwa kusiya chikoro, sezvo amai vake vakanga vasina mari yakakwana yokutsigira dzidzo yake.
Ndopakatanga rwendo rwaManny rwekuita basa remutambi kubva mutsiva, izvo aifunga kuti zvaizomubatsira kuita mari mukuwedzera kutengesa chingwa nemvura mumigwagwa yemuguta.
Manny Pacquiao Biography - Rwendo rweMukurumbira:
Akashongedzerwa nehushingi hwekutenda kwake, Manny akatanga tsiva mukati mepakavhurika paki muGeneral Santos kwaakarova vese vanouya.
Kutsvaga kwake kukwikwidza kwakasimba kwakamuona achienda kuDavao City (150Km kure) uko kwaakarwa nevapikisi vepamusoro-soro kuti azviratidze semutambi wetsiva wepamusorosoro munzvimbo yekumaodzanyemba kwePhilippines, mukati memakore matatu.
Manny Pacquiao Biography - Nyaya Yekubudirira:
1994 raive gore raifadza Manny uyo akatumwa na 'talent scout' Yolanda Parcon kusangana nemabhizinesi murume - Polding Correa muPhilippines guta guru, Manila.
Paakasvika, Polding uyo akambovimbisa kuita maChampions kubva kune anovimbisa varwi akaronga kuti Manny aunzwe kuL & M Gym muSampaloc kwaakadzidzira.
Gore rakatevera, Manny akapedza basa rake rekuita makumi matanhatu nemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nekuita basa rake rekutanga pa60nd yaNdira 4, mune yakapusa kurwa chikamu chehondo chakamuona achikunda Edmund "Kupinda" Ignacio.
Kubudirira kwake kwakauya muna 1998 paakakunda Chatchai Sasakul wekuThailand kunotora World Boxing Council (WBC) flyweight zita.
Kufambira mberi zvakanyanya kusvika musi iye anonzi anonzi ndeyekutanga webhokisi kuti akunde mazita emabhosi mune zvidzidzo zvakawanda.
Nezve Jinkee Jamora - Manny Pacquiao Mukadzi:
WekuAsia ane mukurumbira Boxer haana kuroora. Manny akaroora mudzimai wake ane rudo Jinkee Jamora kubvira mugore re 2000. Tinokuunzira mashoko echokwadi pamusoro pehukama hwavo hwewanano.
Manny akasangana naJinkee Jamora mu1999 paakanga ari muyanzvi wepamusoro mune imwe nzvimbo. Kusiyana naManny, Jinkeen mapatya akaberekerwa mumhuri yepakati-kati musi we 12th yaJanuary 1979.
Thiers aive musoro pamusoro pezvitsitsinho rudo sezviri pachena musarudzo yavo yekukurumidza kuroora mwedzi minomwe gare gare musi wa10 Chivabvu, 2000.
Imba yavo inokomborerwa ne5 inoshamisa vana. Zvinosanganisira:
Emmanuel Pacquiao JR. "Jemueri" (Akazvarwa muna 2000) anoshanda semuenzaniso.
Michael Stephen Pacquiao, akaberekwa muna 2001, anoda zvemimhanzi.
Mary Divine Nyasha Pacquiao, akaberekwa muna 2006, ndiye mwanasikana wekutanga wemhuri.
4. Mambokadzi Elizabeth Pacquiao, akaberekwa mugore ra2008, ndiye ega mugari wemuUS pakati pevanin'ina vake nekuda kwekuti akaberekerwa muLos Angeles.
5. Last but not least is Israel Pacquiao akazvarwa mugore re 2014.
Manny Pacquiao Biography Chokwadi - Nzvimbo Dzakakurumbira dzeHupenyu hwake:
Zviri pachena kuti nyika haisati yamboziva bhokisi rakashandura seManny anosiya bhokisi, akavaka mabasa mune zvinotevera:
Manny Pacquiao murwi wemauto akapinda muPhilippine reserve force muna 2006 uye akawana chigaro chemukuru wemauto muna Zvita 2017.
Manny ari kufambidzana zvakanaka muBucball semudzidzisi uye mutambi kubva 2014.
Pane zvematongerwo enyika, Manny akaumba bato rake rainzi '.Iyo Yevanhu Champ Champ'. Akakwira pati kuti akunde chigaro chemutemo semumiriri wedunhu reSarangani muna Chivabvu 2010.
Akakunda temu yechipiri asina kupikiswa mu2013 uye muna 2016, akahwina chigaro muPhilippines Senate. Yakapihwa kufarirwa kwaManny kukura kwaisazove nguva refu asati ave mutungamiri wePhilippines.
Manny Pacquiao Chitendero:
Manny muKristu akaomeswa-akazvarwa patsva uyo akamboti anonzwa izwi uye Mwari uye aona kupera kwenguva.
“Ndakatonzwa izwi raMwari. Pandakanzwa izwi raMwari, ndiri kudedera uye nekunyunguduka. Ndinonzwa kunge ndafa. Chaive chiitiko chinoshamisa, chinoshamisa ”
The Christian Christian Bill:
Manny Pacquiao kamwe akaronga mutemo weNational Bible Day wakasayirwa mutemo neFhilipian Senate. Achitenda mukuzivikanwa kwake, kurairirwa kwebumbiro rake kwakasangana pasina kushorwa uye ikozvino kwakagamuchirwa muAsia yose.
Mutemo uyu nhasi uno unopemberera chiKristu uye kuchengeta kwedzidziso dzeBhaibheri.
Manny Pacquiao Varaidzo:
"The People's Champ" yatora nguva kubva kune kwake kwakasiyana kwekuedza kuratidza mumamuvhi. Ivo vanosanganisira wake wekutanga wekutungamira muViolett Mafirimu '"Lisensyadong Kamao" (License Fist) inoteverwa na "Anak ng Kumander" (Mwanakomana waCommander) uye superhero / komesi firimu rakanzi "Wapakman".
Asides mabhaisikopo akaisa zvinoonekwa mumitambo yeTV inosanganisira "Pinoy Records", "Totoy Bato, pamwe nesitcom," Ndiratidze Da Da Manny ".
PaZvivaraidzo zvinoenderana, Manny mu2006 akaburitsa dambarefu remimhanzi rakanzi "Laban Nating Lahat Ito" mumutauro wake, Taga. Akanyora zvakare kavha yeDan Hill ya "Dzimwe Nguva Patinobata."
Manny Pacquiao Mabhizinesi:
Manny haasisina zvibvumirano zvekubvumikisa sezvo rake basa retsiva riri kukurumidza kumisikidza kuenda pamudyandigere zvachose. Nekudaro, iye ane mabhizinesi anomuitira kunyemwerera kubhangi.
Zvinosanganisira Roadhaus Economy Hotel, Pacman Wildcard Gym, JMP Shalom Travel uye Tours, pamwe nePacman H20. Zvimwewo Team Pacquiao Chitoro, MP Princess Dhijitari Yekudhinda Solution uye Pacman Beach Resort.
Manny Pacquiao Hupenyu Hwemhuri:
Manny akakurira mumhuri yevamiriri ve6, tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yake.
Nezve baba vaManny Pacquiao:
Baba vaManny vaive munhu anoshanda nesimba uyo akawana kuchengetwa kwemhuri yake nekukanda pasingasviki makumi manomwe emiti pazuva kuti aunganidze makokonati pakati pemamwe mabasa anotyisa asati asiya mhuri yake.
Manny haana kumbobvira ave nehukama hwepedyo naRosalio kwemakumi emakore mushure mekunge aenda nekuda kwekuti akambouraya nekudya imbwa yaManny.
"Kuuraya imbwa" zvaitonyanya "kupfuura kubuda kunze kwemhuri [Rosalio] akatora mbwanana yandakaiwana ndokuiuraya. Kune mukomana wechidiki zvaive zvisingaregererwe - kwaive kuba chimwe chinhu chandaida, zvinova zvinotyisa kukunda kuba mari. Makore anodarika makumi maviri apfuura ndikatadza kumuregerera. ”
Anonyora Manny mubhuku rake roupenyu.
Ivo vaviri vaive zvakadaro vakabatana mu2009 paakashanyira United States kunoona imwe yehondo yaManny.
“Ndakanga ndisingachatsamwe kana kupenga futi. Ndakabva ndamuregerera ipapo ipapo. Makore mazhinji kwazvo akange apfuura uye isu tese takatambura zvakanyanya nekuda kwekanguva kamwe chete muhupenyu hwedu… Zvaive zvakaita semweya uchinatsa kwandiri, kunge bhegi rejecha remazana-pondo rakatorwa kubva pamapfudzi angu. ”
Nezve amai vaManny Pacquiao:
Amai vaManny Dionesia Pacquiao ndiye mukadzi ane basa rekuchengetedza mhuri yake pamwechete mushure mekunge baba vaManny vaenda.
Pakutanga haana kumbobvira atsigira zvinoitwa nemwanakomana wake zvekutanga zvetsiva sezvaaishuvira kuti aizove mupirisita weKaturike rimwe zuva. Kunyange zvakadaro, iye anonyanya kufarira mwanakomana wake.
Nezve hama dzaManny Pacquiao:
Hanzvadzi yaManny mukuru ndiye Isidra Pacquiao-Paglinawan. Zvishoma zvaizivikanwa nezvake kusvikira 2010 apo mapurisa akauraya imba yake pamusana pekushaya kubhejera zvisina kukodzera.
Anotevera mukoma wake muduku Bobby Pacquiao, aimbova unyanzvi wemabhodhi asina kumboita zvakanaka mumutambo sezvo aingova ne 31 mhando kunze kwekuti 15 yakarasika uye 3 kukwikwidzana kwakaguma nekuita.
Panewo Rogelio Pacquiao anozivikanwa saRoel. Ndiye mutori wenhau mune zvematongerwe enyika uyo akamboshanda seMurengeti muGeneral Santos City.
Manny ane hafu-hanzvadzi akaberekwa naamai vake kubva muukama hwekare. Vanosanganisira Liza Silvestre-On ding naDomingo Silvestre.
Manny Pacquiao Mazita emazita:
Manick remadunhurirwa "Pac-Man" yakatorwa kubva pazita rake pamwe nekugona kwake kukwikwidza vanopikisa senge mutambo wemutambo "Pac-man". Iyo "Pac-Man" zvakare ine mamwe maNickname anoimba kurumbidza kwehunyanzvi hwake hwetsiva.
Mazita emadunhurirwa anosanganisira "MuMexicutioner", "People's Champ" uye "Pambansang Kamao" (National Fist). Iye anozivikanwa sa "Iye Mexicutioner" nekuda kwekuti akarova makuru maMexico mabox mune rake basa.
Zvekukosha kwenyika mazita emadunhurirwa ekuti People's Champ uye Pambansang Kamao (National Fist).
Mazita ese ari maviri anoratidza rudo urwo vanhu vePhilippines vanarwo kumurume wavanoona seNyika Pfuma.
Manny Pacquiao Hupenyu hweMunhu kure neBhokisi:
Manny ndomumwe akarwira chikamu chiri nani chehupenyu hwake. Semwana mudiki, aifanira kurwira kudya uye sehunyanzvi, akarwira kuti agare akakodzera.
Zvisineyi, haana kumbobvira abata kubata kwake kwevanhu panguva dzese dzekurwa sezviri pachena pakupa hafu yemari inosvika mamirioni makumi masere emadhora yaakawana kubva mukurwira kwake kwakakurumbira Mayweather kune rudo pakati pezvimwe zvipo zvehupenyu. Maererano naye:
“Ndinotenda kuti nyika ino inoda magamba matsva. Kurwira kukuru muhupenyu hwangu hakusi mumutambo wetsiva asi iko zvino kupedza hurombo munyika yangu ”.
Kure kure nerupo, Manny mutambi anozvininipisa uye anozvibata asingamiri kuziva nemidzi yake. Moreso, Kusiyana nevazhinji vane tsiva nyanzvi, anovenga kutaura kwemarara nekuti hazvienderane nemitemo yake yetsika.
“Kurwa kunofanirwa kuitika pasina hurukuro yemarara uye iwo muenzaniso wakanaka kuvana vanonamata varwi.
Muhupenyu hwangu chiitiko changu kuti kukwidziridzwa kwepamusoro kwave kurwa kwaShane Mosley nekuti munhu wese ishamwari ”.
Chido chake chinosanganisira kuterera mimhanzi, kushamwaridzana neshamwari uye kuedza kuita kuti vanhu vave nzvimbo yakanaka.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Manny Pacquiao Childhood Story pamwe chete biography chokwadi. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!